अध्याय ६४ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
तैँले मेरा वचनहरूलाई पूर्वाग्रहपूर्ण र भ्रमपूर्ण किसिमले बुझ्नु हुँदैन; तैँले यसलाई सबै पक्षबाट बुझ्नुपर्छ, र त्यसलाई अझ सोचविचार गरेर बुझ्नुपर्छ अनि त्यसमाथि बारम्बार विचार-विमर्श गर्नुपर्छ—एक दिन वा रातको निम्ति मात्र होइन। तँलाई मेरो इच्छा के मा छ वा कुन पक्षहरूमा मैले मेहनत गरेर मूल्य चुकाएको छु भन्ने कुरा थाहा छैन; कसरी तैँले मेरो इच्छाको निम्ति वास्ता देखाउन सक्छस्? तिमी मानिसहरू यस्तै छौ—विवरणहरू राम्ररी खोतल्न पूरै असमर्थ छौ, केवल सतहमा केन्द्रित हुन्छौ, अनि केवल नक्कल गर्न मात्र सक्छौ। कसरी यसलाई आत्मिकता भन्न सकिन्छ? यो मानिसको जोश मात्र हो; यो यस्तो कुरा हो जसलाई म सराहना गर्दिनँ, यसभन्दा बढी, यो यस्तो कुरा हो जसलाई म घृणा गर्छु। म तँलाई यो भन्छु: मैले घृणा गर्ने सबै कुराहरूलाई हटाइनुपर्छ, विपत्तिमा पारिनुपर्छ, अनि मेरो ज्वलन र न्यायमा पारिनुपर्छ। नत्र भने, मानिसहरूले भय मान्नुको अर्थ के हो भनी जान्नेछैनन्, अनि अति पथभ्रष्ट हुनेछन्, यसरी मलाई सधैँ मानव दृष्टिले हेर्नेछन्—तिनीहरू अति मूर्ख छन्! शैतानका धारणाहरूबाट आफैलाई मुक्त गर्ने सर्वोत्तम उपाय मसित घनिष्ठ हुनु र मसित कुराकानी गर्नु हो। म तिमीहरू सबै यस नियमअनुसार चलेको चाहन्छु ताकि तिमीहरू न्यायमा पर्नदेखि र तिमीहरूको जीवनमा हानि भोग्नदेखि बच्न सक।
मानिसहरूको निराकरण गर्न अति कठिन छ, तिनीहरू सधैँ बाहिरी मानिसहरू, घटनाहरू अनि कुराहरू, साथसाथै आफ्नै धारणाहरूको अधीनमा हुन्छन्। परिणामस्वरूप, तिनीहरू मेरो निम्ति असल गवाही हुन असमर्थ छन्, र मसित राम्ररी सहकार्य गर्न असमर्थ छन्। मैले लगातार तिमीहरूलाई सहयोग र प्रोत्साहित गरिरहेको छु, तापनि तिमीहरू मसित सहकार्य गर्न आफूले सक्दो गर्न सक्दैनौ। यी सबै कुराहरूले तिमीहरूसित मेरो बुझाइको कमी भएको कुरालाई प्रचुर रूपले देखाउँछ। जब समय आउँछ—जब तँसित मेरो बारेमा उपरान्त कुनै शङ्काहरू हुँदैन—तब साँचो बाटो हिँड्नबाट तँलाई कसैले पनि बाधा दिन सक्नेछैन, र तँमाथि कुनै मानव धारणाहरूको प्रभुत्व हुनेछैन। किन म यो कुरा भन्छु? के तैँले साँच्चै मेरो वाणीहरूको अर्थ बुझ्छस्? मैले यस्ता वचनहरू स्पष्ट पारेपछि मात्रै तैँले अलिकति बुझाइ प्राप्त गर्दछन्। मानिसहरू अति मूर्ख छन् र मगजमा कमजोर छन्। सियोले तिनीहरूको हड्डीलाई घोचेपछि मात्रै तिनीहरूले अलिकति पीडा महसुस गर्न थाल्छन्। भनाइको अर्थ, जब मेरा वचनहरूले तेरो रोगको श्रोत औँल्याउँछ, तब मात्रै तँ पूरै विश्‍वस्त हुन्छस्। तथापि, तिमीहरू कहिलेकहीँ मेरा वचनहरूलाई अभ्यास गर्न र आफैलाई चिन्न अनिच्छुक हुन्छौ। किन, यस बिन्दुमा, मानिसहरूको निराकरण गर्न कठिन हुन्छ भनी तिमीहरूले अझै बुझेका छैनौ? मेरा वचनहरू पर्याप्त रूपले स्पष्ट वा पारदर्शी नभएर हो कि? तिमीहरूबाट मैले चाहने कुरा भनेको, तिमीहरूले मसित गम्भीरतापूर्वक र इमानदारपूर्वक सहकार्य गर भन्‍ने हो; तिमीहरूले मसित कुनै आनन्ददायक लाग्ने वचनहरू बोले पनि, नबोले पनि, जहिलेसम्म तिमीहरू मसित सहकार्य गर्न इच्छुक हुन्छौ अनि इमान्दारीपूर्वक मलाई आराधना गर्न सक्छौ, तिमीहरू मेरो सुरक्षामुनि आउनेछौ। यस्तो प्रकारको व्यक्ति अत्यन्तै अज्ञानी भएतापनि, म तिनीहरूलाई अन्तर्दृष्टि दिनेछु ताकि तिनीहरूले आफ्नो अज्ञानतालाई हटाउन सकोस्। किनकि मेरा कार्यहरू अनिवार्य रूपले मेरा वचनहरूसित मेल खान्छन्; म सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर हुँ जसले कहिल्यै पूरा गर्न नसक्ने प्रतिज्ञा गर्दैन।
म मण्डलीहरू र सबै ज्येष्ठ पुत्रहरूलाई तुरुन्तै मेरो इच्छाहरू प्रकट गर्नेछु, अनि कुनै पनि थोक फेरि लुकेको हुनेछैन, किनकि सबै कुरा प्रकट हुने दिन आएको छ। भनाइको अर्थ, “लुकेको” भन्ने शब्द अबदेखि फेरि प्रयोग हुनेछैन, कुनै पनि लुकेको कुरा अस्तित्वमा रहिरहनु त झन् परको कुरा हुनेछ। सबै लुकेका मानिसहरू, घटनाहरू, अनि कुराहरूलाई निश्चय नै एक-एक गरी उदाङ्गो पारिनेछन्। म बुद्धिमान् परमेश्‍वर हुँ जसले पूरा अख्तियार चलाउँछ। सबै घटनाहरू, कुराहरू र हरेक व्यक्ति मेरा हातहरूभित्र सम्हालिएका छन्। म तिनीहरूलाई उदाङ्गो पार्न मेरो आफ्नै कदमहरू लिन्छु, र म तिनीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले एक-एक गरी उदाङ्गो पार्नेछु। ज-जसले मलाई छलपूर्वक मनाउन खोज्छन् वा कुनै कुरा मबाट लुकाउने कोसिस गर्छन्, तिनीहरू कहिल्यै फेरि उठ्ने छैनन् भनेर म सुनिश्चित गर्नेछु। म यस मामलामा कदम उठाउनेछु ताकि तिमीहरू सबैले देख्ने गरी यो स्पष्ट होस्। राम्रोसित हेर! मेहनत गरेर मैले चुकाएको मूल्य व्यर्थमा गएको छैन; यसले फल फलाउनेछ। ज-जसले ध्यान दिँदैनन् वा आज्ञा मान्दैनन्, तिनीहरूले तुरुन्तै मेरो न्यायको सामना गर्नेछन्। को अझै मेरो विरुद्धमा जाने साहस गर्नसक्छ? तिमीहरू सबैले मेरो आज्ञा मान्नुपर्छ। म तँलाई यो कुरा बताउँछु: मैले भन्ने र गर्ने सबै कुरा, अनि आज मसित भएको हरेक कार्य, धारणा, सोच र योजना सबै पूर्ण रूपले सही छन्; तिनीहरूले मानिसको लागि कुनै आगामी सोचविचारको ठाउँ छोड्दैनन्। तिमीहरूले गर्नुपर्ने कुरा भनेको पछ्याउनु मात्र हो, अनि यसको बारेमा थप केही सोच्नु आवश्यक छैन भनेर किन मैले तिमीहरूलाई बारम्‍बार भन्‍ने गर्छु? यो यही कारणको निम्ति हो। के मैले यसलाई अझै स्पष्ट पारेको तिमीहरू चाहन्छौ?
तिमीहरूमाथि तिमीहरूका धारणाहरूको प्रभुत्व छ, तापनि तिमीहरू यो सोच्दैनौ कि यो तिमीहरू आफैले पर्याप्त प्रयास नगरेको कारणले हो। यसको साटो, तँ कारणहरूको निम्ति मलाई हेर्छस्, अनि मैले तँलाई अन्तर्दृष्टि दिएको छैन भनी भन्छस्। यो कस्तो किसिमको कुरा हो? तँ आफैले जिम्मेवारी लिँदैनस् अनि सधैँ मलाई गुनासो गरिरहन्छस्। यदि तैँले यसरी जारी राखेर कुनै मूल्य नचुकाई अघि बढिरहन्छस् भने तँलाई फ्याँकिनेछ! तिमीहरूलाई भयभीत पार्न म सारा दिन ठूलो कुरा गरेर हिँड्दिनँ। यो वास्तवमै तथ्य हो: म जे भन्छु, त्यो गर्छु। मेरा वचनहरूले मेरो मुख छोड्ने बित्तिकै, तिनीहरू तुरुन्तै पूरा हुन थाल्छन्। यसभन्दा अघि, मैले उच्चारण गरेको वचनहरू विस्तारै पूरा हुन्थे; अहिले कामकुराहरू फरक भए पनि उपरान्त ढिलो हुनेछैन। अझ स्पष्ट रूपले कुरा गर्दा, म उपरान्त बाध्य गर्दिनँ वा फुस्ल्याउँदिनँ; त्यसको साटोमा, म तिमीहरूलाई प्रेरित गर्छु अनि करमा पारिरहन्छु। अझ बढी स्पष्ट रूपले भन्दा, ती जसले गतिलाई कायम राख्छन्, तिनीहरूले यसो गर्नेछन् जबकि ती जसले गतिलाई कायम राख्न सक्दैनन्, अनि जो निरन्तर अघि बढ्न सक्दैनन्, तिनीहरूलाई हटाइनेछ। मैले तिमीहरूलाई हरसम्भव प्रकारले धीरज भएर बोल्ने प्रयास गर्थें तर तिमीहरूले सुन्दै सुनेनौ। काम यो चरणसम्म जारी रहेको कारणले तिमीहरूले के गर्नेछौ? के तिमीहरूले साँच्चिकै आफ्नै इच्छापूर्ति गर्न जारी राख्नेछौ? त्यस्ता मानिसहरूलाई पूर्ण तुल्याउन सकिँदैन तर तिनीहरूलाई निश्चय नै मद्वारा हटाइनेछ!
अघिल्लो: अध्याय ६३
अर्को: अध्याय ६५